NATIIJADA KOOXAHA GUUD - Meel aad u xun oo loogu talagalay ALLAHS of Arts Arts Martials - Qaybta 1 - Dhulka Quduuska ah ee Daraasadaha Vietnam
2377 Views Prof. Assoc. HUNG NGUYEN MANH
Sida laga soo xigtay Dai Nam thuc luc [Nami Nam thực lục] (Taariikhda Dai Nam) (mugga 17), Nguyen [Nguyễn] Dawladnimadu waxay dhistay nidaam xasilloon oo xasilloon waxayna adeegsan jireen halkudhigyo dagaal oo lagu joojinayo kacdoonka dadka saboolka ah. Hogaamiyaasha militarigu waxay kaloo la kulmeen dagaallo ka dhan ah Tay Wiil [Taa Sơn] oo ku bislaaday habkaas. Sidaa darteed, ka dib markii uu helay nabadgalyo, amiirku wuxuu amar ku bixiyay dhismaha dugsiga fanka dagaal iyo in la dhiso macbudka fanka dagaalka cado [Huu], Qasriga boqortooyada (waqooyiga Wabiga Huong [Hương]). Macbudkii fanka dagaalka ayaa la dhisay sanadkii 1835, Sannadkii Ri, at Nin [Nin] Tuulo, Huong Tra [Hương Trà] Degmo). Bo Le [Bộ Lễ] (Wasaaradda Rites) aasaasay set a diiwaanada, dib u helida macluumaadka ka Ly [ly] boqortooyo. Ly Thuong Kiet [Lý Thường Kiệt] ka adkaaday Tong [Tng] ciidammo; Tran Quoc Tuan [Trần Quốc Tuấn] guulo badan oo uu soo saaray Buug Milateri oo qiimo leh; Tran Nhat Duat [Trần Nhật Duật] laga adkaaday Nguyen [Nguyên] ciidammo leh guulo sharaf leh. Intii lagu gudajiray Le [Lê] boqortooyo, Liin Liin [Hinh Liệt] wuxuu ahaa hogaamiyaha nabadeynta Wu (Shiinaha). Liiska, waxaa ku jiray sumcad iyo hammi Le Ngoi [Lê Ngôi]. Hoos Le Trung Hung's [Lê Trung Hưng] xukun, Hoang Dinh Ai [Hoàng Đình Ái] guulo badan ayuu adeegsaday qaansooyin iyo seefo.
Hoggaamiyayaashii militariga ee lahaa awood jireed oo aan caadi aheyn waxay xirfadooda ku gudan kareen boqorka hortiisa waxayna ku dalaceen iyagoon wax baaritaan ah sameyn. Tusaale ahaan, Digada Mac Dang [Digo Mạc Đăng] wuxuu ahaa kalluumaysi awood aad u wanaagsan qabtay. Mar, wuxuu tegey caasimadda. Intaan gudbayayo Giang Vo [Guga Võ] Iskuul, wuxuu arkay wrestrest iyo culeys-qaadayaasha oo ku tartamaya boqorka hortiisa. U aragto guuleystuhu inuu kibirsan yahay guusha, Digada Mac Dang [Digo Mạc Đăng] codsaday rukhsad si uu ula tartamo ka guuleystaha. Si kastaba ha noqotee, boqorka amiirku wuxuu ka codsaday inuu wiish qaado. Wuxuu kor u qaaday laba culeys oo boqolaal kiilo ah isagoon dhididin oo wuxuu noqday horyaal culeys. Digada Mac Dang [Digo Mạc Đăng] waxaa lagu sharfay inuu noqdo hogaamiyaha dhamaan halgamayaasha iyo culeys-qaadayaasha. Intaa ka dib, wuxuu magacaabay Samee chi huy su [Đô chỉ huy sứ] (Taliyaha). Goor dambe, Digada Mac Dang [Digo Mạc Đăng] ka adkaaday cadaawayaashii oo ku guulaystay awood.
Intaa ka dib, isagu carshigiisii ​​wuu laalay oo wuxuu abuuray Rabbiga Mac [Mạc] Dawlad. In kasta oo uu horey u ahaan jiray Emperor, fanka legdinta wuxuu ku soconayaa dhiiggiisa, sidaa darteed wuxuu had iyo jeer doonayay inuu la tartamo carbins-ka mantar artials maxkamadda boqortooyada. Qof kasta oo isaga lumay ayaa hoos loo ridi doonaa. Markii uu la kulmay ardayda ka qalin jabisa fanka, wuxuu kula tartami lahaa inay garaacaan si loogu tixgeliyo inay yihiin qalin jabiyayaal rasmi ah.
Inta lagu guda jiro Nguyen [Nguyễn] Xilliyadii sayidka, Dao Duy Tu [Oào Duy Từ] wuxuu caan ku ahaa farshaxanimada, iyo buugga milatariga. Waxaa jiray Ton Taasi Thuan [Tôn Thất Thuần] oo ka adkaaday cadaawayaashii; Nguyen Huu Tien [Nguyễn Hữu Tiến] iyo Nguyen Huu Dat [Nguyễn Hữu Dật] yaa adkaaday Trinh [Tarahanh] ciidamada marar badan fardooleyda. Waqtiga Nguyen [Nguyễn] boqortooyo, waxaa jiray Chu Van Tiep [Chu Văn Tiếp], Vo Tanh [Võ Tánh] oo ahaa dad caqli badan oo dhiirran. Sidoo kale, Ton Taasi Hoi [Tôn Thất Hội] lahaa mudnaan badan; Nguyen Van Truong [Nguyễn Văn Trương] ka adkaaday Tay Wiil [Taa Sơn] ciidan; Nguyen Hoang Duc [Nguyễn Hoàng Đức] waxaa loo magacaabay Tiger General. Lix iyo toban hoggaamiyeyaal ciidan ah, saddex iyo toban ayaa lagu caabudo at Mieu lich dai de vuong [Miếu lịch đại đế vương] iyo shan iyo labaatan iyo lagu caabudi jiray at Thai mieu [Thái miếu] iyo Mieu [Thế miếu] ee Nguyen [Nguyễn] Dawlad.
Sanadkii 20-aad ee Minh Mang's [Minh Ming] boqornimadii (1839), maxkamadda boqortooyadu waxay amartay in sedex xaraf oo mudan in laga dhigo barxadda hore ee macbudka farshaxanka toban xirmooyin faneedyo dagaal. Xarkaha waxaa lagu xardhay magacyadooda, magacyadooda, magacyadooda, iyo tabarucaadnimadii xilliyadii Gia Long [Gia Long] iyo Minh Mang [Minh Ming]. Ay ahaayeen: Truong Minh Giang [Trương Minh Giảng] (Gia Dinh [Gia Đšh]), Pham Huu Tam [Phạm Hữu Tâm] (Thua Thien Hue [Thừa Thiên Huế]), Ta Quang Cu [Tạ Quang Cự] (Thua Thien Hue [Thừa Thiên Huế]), Nguyen Xuan [Nguyễn Xuân] (Thanh Hoa [Thanh Hoá]), Pham Van Dien [Phạm Văn Điển] (Thua Thien Hue [Thừa Thiên Huế]), Phan Van Thuy [Phan Văn Thủỵ] (Quang Nam [Quảng Nam]), Mai Cong Ngon [Mai Công Ngôn] (Thua Thien Hue [Thừa Thiên Huế]), Le Van Duc [Lê Văn Đức] (Vinh Long [Vĩnh Long]), Tran Van Tri [Trần Văn Trí] (Gia Dinh [Gia Đšh]), Iyo Batanka Tooska ah [Tôn Thất Bạt] (Thua Thien Hue [Thừa Thiên Huế]). Sanadkii 1854, markii lagu eedeeyay "premedmed" kacaankii Hong Bao [Hồng Bảo] (walaal Tu Duc [Tự Đức]), magaca Batanka Tooska ah [Tôn Thất Bật] laga saaray futada.
Under Tu Duc's [Tự Đức] boqornimada, waxaa jiray laba qalcad oo kale oo loo dhigay tien si vo [tiến sĩ võ] (dhakhaatiirta cilmiga fanka), sayidyadeeye alxanle ah oo ka gudbay saddexdii imtixaan ee halyeeyada martigelinta: sanadka sanadka Buffalo (1865), Sanadka masduulaaga (1868), iyo Sanadka Masaska (1869). Ay ahaayeen: Vo Van Duc [Võ Văn Đức] (Quang Nam [Quảng Nam]), Vo Van Luong [Võ Văn Lương] (Quang Tri [Quảng Tihi]), Van Van [Văn Vân] (Thua Thien Hue [Thừa Thiên Huế]), Pham Hoc [Phạm Học] (Quang Nam [Quảng Nam]), Nguyen Van Tu [Nguyễn Văn Tứ] (Binh Dinh [Bình Đšh]), Duong Viet Thieu [Dương Việt Thiệu] (Thua Thien Hue [Thừa Thiên Huế]), Samee Van Kiet [Ă Văn Kiệt] (Quang Tri [Quảng Tihi]), Dang Duc Tuan [Đặng Đức Tuấn] (Binh Dinh [Bình Đšh]), Tran Van Hien [Trần Văn Hiển] (Thua Thien Hue [Thừa Thiên Huế]), Iyo Le Van Truc [Lê Văn Trực] (Quang Binh [Quảng Bình])1
Si kastaba ha noqotee, inta lagu guda jiro ansixinta rasmiga ah, Minh Mang [Minh Ming] ku darey qaar ka mid ah shuruudaha: Marka hore, qofku waa inuu leeyahay mudnaan la xaqiijiyay, oo tusaale u noqon kara jiilalka soo socda. Shuruudaha dartiis awgiis, dadka qaar ayaa laga saaray liiska, oo ay ku jiraan Ly Thuong Kiet [Lý Thường Kiệt], yaa bohon ahaa (?)
Tran Nhat Duat [Trần Nhật Duật], Liin Liin [Hinh Liệt], Hoang Dinh Ai [Hoành Đình Ái] waxaa loo arkaayay oo keliya inay yihiin hoggaamiyeyaal milateri goobaha dagaalka. Ka sokow, waxaa sidoo kale jiray qaar ka mid ah xaddiga xaddiga rasaasta Nguyen [Nguyễn] Dawlad kaliya ayaa loo tixgaliyaa inay yihiin lataliyayaasha gadaasha dambe. Ton Taasi Thuan [Tôn Thất Thuần] kaliya waxay ahayd liito cod ah, ma ahayn cao liet. Nguyen Hoang Duc's [Nguyễn Hoàng Đức] talanti ma ahayn mid la yaab leh.
Ugu dambeyntii, Minh Mang [Minh Ming] loo oggolaaday in lix moosin oo lagu caabudo Nha giai vu ta huu [giải vũ tả hữu] (guriga bidix iyo guriga saxda ah). Tran Quoc Tuan [Trần Quốc Tuấn] iyo Le Khoi [Lê Khôi] waxay ahaayeen jeneraal caan ah oo ka soo jeeda dowladii hore. Liiska la ansixiyay ayaa sidoo kale ka koobnaa Nguyen Huu Dat [Nguyễn Hữu Đạt] iyo Nguyen Huu Truong [Nguyễn Hữu Trương] kuwaas oo ahaa jeneraal caan ah intii lagu jiray Nguyen [Nguyễn] Dawlad.
Si loo daryeelo macbudka fanka dagaalka, waxaa jiray labaatan qof oo rayid ah reeraha u dhawaa oo daryeela cibaadada sanadlaha ah laba jeer guga. Labada cibaadada ayaa isla markiiba la sameeyay cibaadada kadib Lich dai de vuong [Lich đại đế vương]. Sahayda munaasabadda ee cibaadada waxaa ka mid ahaa hal dibi, hal ari, laba doofaar, iyo shan saxan oo bariis dheg dheg ah leh.
Sawir - xigasho: vn.360plus.yahoo.com
(Booqday jeer 1,310, booqashooyinka 1 maanta)
← Noocyada DUGSIYADA GUUD EE XULASHADA iyada oo loo marayo FEYAL DYNASTIES
NATIIJADA ARRIMAHA GUUD - Meel aad u xun oo loogu talagalay ALLAHS of Arts Arts Martials - Qaybta 2 →
Booqashada Maanta: 149
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,070
Guud ahaan Wadarta: 285,965